“ မင်းရဲ့ဘဝကိုမဖန်တီးပါနဲ့၊ အိပ်မက်တွေမမက်ပါနဲ့” ကိုဝယ်ပါ။ အနုပညာ Vinyl Quote နံရံကပ်စတစ်ကာများ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မဆောင်ပါ WoopShop®
အနုပညာဗီနိုင်း Quote အမှတ်တရစတစ်ကာများ "သင်၏အိပ်မက်များ Live, သင့်အသက်တာ Dream မနေပါနဲ့"
အရွယ် 15cm X ကို 57cm
15cm X 57cm / အနက်ရောင်
"မင်းရဲ့ဘဝကိုမစိတ်ကူးပါနဲ့။ အိပ်မက်တွေကိုသာအသက်ရှင်ပါစေ" Art Vinyl Quote နံရံကပ်စတစ်ကာများ - ၁၅ စင်တီမီတာ X ၅၇ စင်တီမီတာ / အနက်ရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
pattern: လေယာဉ်က Wall စတစ်ကာ
အရွယ်အစား: 15cm X 57cm (5.9inch X 22.4inch)
ပစ္စည်း: Eco-Friendly ဗီနိုင်းစတစ်ကာများ
အထုပ်ပါ ၀ င်သည် - Wall Sticker x1, လွှဲပြောင်းရသောရုပ်ရှင် x1, ညွှန်ကြားချက် x1
Step1: ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်, လွှဲပြောင်းရုပ်ရှင်တစ်ကဒ်နှင့်ကတ်ကြေးကိုပြင်
Step4: လိုအပ်လာရင်, အပိုင်းပိုင်းဖြတ်
Step6: မြို့ရိုးပေါ်မှာက Paste နှင့်ကဒ်နှင့်အတူကခြစ်ရာ
Tutto bene come descrizione ။
ရေကြောင်းအလွန်အစာရှောင်ခဲ့သည် !!!!2ရက်သတ္တပတ်များတွင်ပစ္စည်းရောက်လာတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!